Top 5 webcam taariikhqorihii 2015
Webcama waa kuwa ugu khayr iyo gobolka jidka tahay si loo hubiyo in user helo la xiriiri saaxiibadaa iyo xubnaha qoyska si fudud oo ku qanacsan. Waa sabab la mid ah in Webcama hadda yihiin qayb muhiim ah oo nidaam ah in la soo saarayo arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in Webcama yihiin dibadda iyo sidoo kale in la hubiyo in factor ee karo waa sii raagayaan. Marka ay timaado in rikoorrada webcam ay sidoo kale loo arkaa ugu fiican oo gobolka ka mid ah qalab tahay si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan oo arrinta guud ee video duubo sidoo kale loo xalin lahaa. In this 5 sare rikoorrada webcam tutorial ee sannadka 2015 waxaa lagu xusay doonaa si loo hubiyo in user helo doorasho oo ugu wanaagsan waxaa loo doortay in ay sii wadi.
Rikoorrada Maxaad webcam?
Waxaa jira arrimo dhawr ah oo la xidhiidha rikoorrada webcam sida loo isticmaalo si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican iyo gobolka natiijo tahay marka ay timaado badbaadiyaan videos waxbarashada iyo arrimo kale ayaa sidoo kale lagu xalin arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah qalab farshaxan ah waxaa loo isticmaalaa in arrintan la xiriira si loo hubiyo in tayada video ah ma aha oo kaliya sare laakiin user sidoo kale uu helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah Natiijada tahay marka ay timaado wareejinta video ah.
Maanta Webcama in lagu horumariyo Shiinaha waxaa ka mid ah tayada ugu wanaagsan iyo qiimaha sidoo kale waa macquul ah si ay u xagliyaan mid ah laga keeno waa aan macquul ahayn, sida farsamada la mid ah hawlo ka xoogbadan, waxaa loo soo bandhigay by Shiinaha sidaas waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in ay Chinese sameeyey cams waxaa la siineyaa mudnaanta ay sabab u tahay natiijo wanaagsan iyo nolol dheer.
Faa'iidooyinka barnaamijyada taariikhqorihii webcam
Sida lagu Xusi, ka hor iyo weliba in ay jiraan arrimo dhawr ah oo la xidhiidha this ifafaale iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in qodobbada soo socda waxaa lagu hayaa maskaxda ka dhigi doonaa sida ay yihiin faa'iidooyinka adigoo isticmaalaya Barnaamijyada webcam ku fudayd iyo qanacsanaanta,
Top 5 rikoorrada webcam Best 2015
Tani waa qayb ka ugu weyn ee tutorial in la hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay marka ay timaado taariikhqorihii webcam iyo xal la xiriira si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si ay nidaamka iyo sidoo dhigi lahaa. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in sidaas liiska waa in aan la tixgeliyaa sida final iyo rikoorrada dadka kale waa in sidoo kale la browsed oo raadinaya online si aad u hubiso in natiijada ugu wanaagsan laga helo iyo user wuxuu sidoo kale uu helo ugu fiican iyo gobolka of farshaxanka keeni arrintan la xiriira.
Taariikhqorihii 1. EatCam webcam
Waa mid ka mid ah rikoorrada ugu fiican si loo hubiyo in user sidoo kale helo hawlaha tafatirka in lagu gundhig gudahood barnaamijka si ay ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada farshaxanka ee lagu helay wakhti ma gudahood oo dhan. Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo barnaamijka ugu horumarsan ayaa ka dhacay ugu horeysay ee liiska ay sabab u tahay koobaa in ay bixisaa si user ah ee la xiriirta in la duubo iyo labada sixiddiisa.
2. Wondershare video taariikhqorihii
Tani waxay sidoo kale waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu casri ah in ay u qoraan karaan oo keliya ma aha videos webcam, laakiin wax kasta oo video oo la ciyaaray internet-ka oo sabab la mid ah waxa ay sidoo kale waxaa loo arkaa ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka ka dhigi ma noqon doono oo kaliya hubiyo in video waxaa lagu diiwaangeliyaa HD laakiin convertor la xiriira sidoo kale hubin doona in video ah waxaa loo baddalaa user qaab doonayo markaas oo ay jiraan oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Sidaas awgeed waa in mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka qalabka farshaxanka arrintan la xiriira.
3. screencast Free
Barnaamijkan waxa ugu fiican in la hubiyo in user helo natiijooyinka ku jira line shuruudaha. Mid ka mid ah qaababka ugu muhiimsan ee Cam waa in ay timaado la maaweelin oo sidaas daraaddeed waa la horjoogsan karaa oo bilaabay weli haddii user ka fog Cam muddo qaar ka mid ah wakhtiga ay tahay iyo shaqada maaha mid loo gundhig in mid ka mid ah barnaamijyada lagu xusay liiska ilaa hadda.
4. Free 2x taariikhqorihii webcam
Barnaamijka waxa uu leeyahay firmware ugu xasilloon gudahood liiska in lagu Xusi, oo sidaas daraaddeed waa heer sare ah ayaa lagu talinayaa in kuwa isticmaala kuwaas oo doonaya in la hubiyo in natiijooyinka ugu fiican laga helo ama ay yihiin kuwa isticmaala noocan oo kale ah barnaamijyada heer xirfadeed.
5. ugu horeysay ee video qabashada
Waa barnaamij multi functional taas oo ka dhigaysa hubiyo in duubay ayaa la sameeyaa ka webcam ah, screen iyo sidoo kale qalabka audio in user uu doonayo in uu isticmaalo arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in barnaamijka si fiican loo tijaabiyey ka hor intaan la soo bixi si aad u hubiso in natiijada ugu wanaagsan waxaa lagu helaa arrintan la xiriira.
Maxaad Record iyo Edit A Video?
> Resource > Record > Best webcam taariikhqorihii 2015